Serbia: Kiraro mivady iray, ain’olona iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jolay 2010 20:26 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Italiano, Español, srpski, македонски, English
Na dia efa 15 taona aza izao no lasa taorian'ny fandripahana olona tao Srebrenica , dia mbola tsy voasambotra hatramin'izao ny jeneraly Ratko Mladic -Lehiben'ny tafiky ny Repoblika Srpska (tafiky Serba Bosniaka) izay nomelohan'ny Fitsarana ao La Haye tamin'ny famonoana an-kerisetra silamo mihoatra ny 8000 teto amin'ity tanan-dehibe Bosniaka ity tamin'ny faha 11 jolay 1995.
Na dia efa niala sasatra tao Serbia aza i Mladic taona vitsivitsy taty aoriana, ka tazana teny amin'ny kianjan'i “Marakana” tao Belgrade izy nandritra ny fotoana nilalaovan'ny ekipa nasionaly Serba tamin'ny taona 2003, dia nanambara ny mpitandro ny filaminana Serba fa tsy fantany raha miafina ao Serbia tokoa i Mladic na tsia. Midika mazava tsara izany fa tsy afa-manatanteraka ny adidiny ry zareo na tsy tiany ny hankanesany any aminy ka hisambotra an'i Mladic, mba tsy hamoha ny fahatezeran'ny Serba maro izay mihevitra an'i Mladic ho mahery fon'ny firenena. Ny tena ao an'eritreritr'izy ireo manko dia hoe ireo manamboninahitrany sy miaramilany izay nahazo an'i Srebrenica tamin'ny faha 11 Jolay – tanàna narovan'ny tafiky ny Firenena Mikambana avy any Holandy – ka nanasaraka ny zaza amam-behivavy, ary namono ny lehilahy rehetra tao an-tanàna sy ny manodidina, dia nanatontosa valifaty tamin'ny Silamo noho ny famoizany ny mpiray tanindrazana amin-dry zareo analiny, naripaky ny Silamo an-kerisetra tao Bratunac sy tany amin'ny toeran-kafa tao Bosnia nandritra ny adim-poko sy tamin'ny ady lehibe faharoa.
Etsy ankilany indray, misy koa ireo olona ao Serbia izay mihevitra fa fahafam-baraka lehibe indrindra ho an'ny firenena io zava-niseho tao “Srebrenica” io. Ny sasany amin'izy ireo dia olona manam-pahaizana, mpanakanto, ary mpikambana amin'ny hetsika sivika toy ny Skart (ny Fanilihana), Centar za kulturnu dekontaminaciju (Ivokolontsaina famonoana aretimihanaka), ary i Zene u crnom (Vehivavy miakanjo mainty) avy ao Belgrade. Miara-miasa amin'ny renim-pianakaviana avy any Srebrenica izay namoy ny havana aman-tsakaizany nandritra ny fandripahana.
Nisy fihaonana nifanaovan'izy ireo tamin'ny 7 Jolay tamin'ity taona ity ka ny foto-dresaka dia ny hoe — “Kiraro mivady iray, ain'olona iray” — notontosaina teo afovoan-tanàna izay nanangonana kiraro mivady miisa 8372 (isa ofisialin'ny olona naripaka araka ny nolazain'izy ireo) mba hananganana tsangambato ao Belgrade ho fahatsiarovana an’ ireo namoy ny ainy tao Srebrenica.
Ao amin'ny tranonkala bezimena.org,i Sonja no namoaka fanindroany ny fanambaran'ny mpikarakara, nivoaka ny folakandro mialoha ny androm-pihaonana tamin'ny faran'ny volana Jona. Ampahany tamin'izany ity manaraka ity:
Ny hetsika dia niainga avy amin'ny fikambananana iraisam-pirenena iray ka nandraisan'ny vehivavy avy any Srebrenica anjara. Noho ny fandraisany anjara sy ny fitiavanay hiara-mijoro amin'izy ireo, no nanaovanay izao fanapahan-kevitra izao, izay mifanaraka amin'ny politikanay sy ny etikanay. Natao handraisan'[ny rehetra] anjara sy hiantefa amin'ny mponin'i Serbia io hetsika io ary antenaina izy ireo hanangana tsangambato maharitra, izany moa dia ho fanehoan'izy ireo ny fandraisany andraikitra ary firaisankina amin'ireo niharamboina […]
[…]Miantso ireo mponina izahay mba hanolotra kiraro sy hametraka hafatra ho an'ny fianakavian'ireo namoy ny ainy. Ilaina ny fametrahanareo ny anaranareo na ny anaran'ilay olona izay nanome kiraro. Horaisina an-tsoratra anaty boky ny anaran'ireo olona nanolotra kiraro . Ny hevitra tiana avoaka dia izao, rehefa voatsangana ilay tsangambato, dia misoratra eo amin'ilay vatom-pahatsiarovana ny anaran'ireo nanolotra fanomezana[…]
Afaka mametraka kiraro sy hafatra eny amin'ny peta-drindrina ny mponina, izany dia napetraka manaraka ny sisin-dalana manaraka ny Knez Mihailo. Izao no vakin'ny peta-drindrina: “Fandraisana andraikitra sy firaisan-kina – ny “Vehivavy miakanjo mainty” miaro ny zon'olombelona – ny “Vehivavy miakanko mainty” manohitra ny ady”.
Noho ny fandrahonana niantefa tany amin'ny mpikarakara izay nataon'ny antoko tia tanindrazana maka an-tendrony, dia nisy vondro-polisy niandraikitra ny fiarovana io fihaonana io. Tamin'ny takariva mialoha io hetsika io, dia namoaka fanambarana ofisialy narahana vazivazy ny hetsiky ny Serba tia tanindrazana Nasi (ny Orsa), izay niantso ny vahoaka ho tonga eny amin'ny lalana Knez Mihailo, haka sy hampiasa ireo kiraro avy any amin'ireo vondrona mainty hoditra, noho ny krizy ara-toe-karena.
Niteny tao amin'ny Radio Free Europe i Svetlana Slapsak, mpahay fomba amam-panao sady mpandalina momba ny teorian'ny kolontsaina, fa efa nampoizina ihany io karazana fihetsiketsehana ataon'ny antoko ankavanana io izay manasongadina ny fitodihana amin'ny lasa, na dia hita aza fa kely dia kely ny fandraisan'ny fitondrana sy ny fiaraha-monim-pirenena andraikitra ireo izay tena iharan'ny mafy ao Serbia. Mihevitra izy fa meloka ara-moraly koa ny fahefana noho izy ireo tsy nikarakara hetsika tahaka izao.
Nilaza I Stasa Zajovic, vehivavy iray ao amin'ny vondrona Women in Black, izay nanatontosa ny hetsika :
Ny fanomezana kiraro dia manamarika fa ekena ny fisian'ny fandripahan'olona tany Srebrenica ary [maneho] koa fangoraham-po sy firaisankina amin'ireo novonoina.
Manazava bebe kokoa ny zavatra ambaran'ny kiraro izy etsy ambany:
Amiko, dian-tongotry ny olona izay mbola tavela ao Sebrenica ny kiraro ary manan-danja eo amin'ny fiainako tokoa io dian-tongotra io . Fanamarihana ny famoizana ny aina ny kiraro ary tianay hanana ny toerany ny kiraro tsirairay avy, satria tsy taolam-paty fotsiny sisa ireo izay namoy ny ainy. Foana avokoa ny nofinofy, ny faniriana, ny fitiavana sy ny alahelon'ireo olona ireo. Manamarika ny fihetsiketsehana natao koa ireo kiraro ireo.
Na dia teo aza ny fisian'ny fikambanana antoko tia tanindrazana ekstremista amam-polony maromaro teo afovoan'i Belgrade tamin'ny fotoana nanehoan'ny Women in Black ny fihetsika mampiseho ny mahaolombelona manoloana ny famonoan'olona tao Srebrenica ka nanangonana kiraro, io fahaizana maneho marika io, izay natao fotoana fohy talohan'ny fotoana ofisialy ahatsiarovana ireo namoy ny ainy tany Potocari, dia tsy nahitàna zava-tsampona hatramin'ny farany.
Nanatrika ny fotoana fahatsiarovana natao tao Potocari ny Filoha Boris Tadic
Isan-taona, ny fotoana fahatsiarovana ireo olona mihoatra ny 8000 izay namoy ny ainy tamin'ny famonoan'olona tao Srebrenica dia natao tao amin'ny fanorenam-pahatsiarovana marolafy tao Potocari. Nanatrika io fotoana io ny filohan'ny repoblika Serba, Andriamatoa Boris Tadic, tamin'ity taona ity. Hoy ny BBC Serba tamin'io fotoana io: naneho ny alahelony tamin'ireo namoy ny ainy ny filoha ary nanampy izy hoe: tsy hitsahatra ny hitady ny nahavanon-doza izy indrindra indrindra fa i Ratko Mladic.
Voina ho an'i Bosniaka sy ho an'ireo mponina tao amin'ny Yogoslavia teo aloha io. Mety mbola hiverina ity takelaka eo amin'ny tantara ity raha mbola tsy voasambotra ireo olo-meloka.
Tany amin'ny fiandohan'ity taona ity, ny Antenimieram-pirenen'ny repoblika Serba dia namoaka fanambarana mikasika an'i Srebrenica. Tamin'io fotoana io, namoaka ny lahatsoratra iray manontolo tao amin'ny fanambarana ny blaogy “Srebrenica-genocide”, ka nofaranany tamin'ny:
…Ao anatin'ity fanambarana ity dia manaiky amin'ny fomba ofisialy i Serbia fa namono olona tao Srebrenica tamin'ny volana jolay 1995…
Na dia nanantena aza ireo olona manam-pahaizana sasany, ny mpahay lalana sasany ary ny olon-tsotra fa ho faritana ho anisan'ny famonoan'olona efa maty paika ny voina tao Srebrenica, dia tsy nitranga akory izany. Hita soritra mazava tsara fa ilay teny (“genocide”) dia niniana nesorina tao anatin'ny lahatsoratra niaingana satria maro ireo vahoaka tao Serbia (araka ny efa voalaza) no mandà hoe nisy famonoan'olona efa maty paika tao Srebrenica, fa nofaritan'izy ireo ho valifaty ara-drariny izany.
Ankoatra izay, olona maro avy any Serbia sy avy any amin'ny Repoblikan'i Srpska (Republic of Srpska) no sorena amin'ny fahefana Serba, satria tsy mbola nanatrika ny fotoana fahatsiarovana ireo 3267 Serba namoy ny ainy tamin-kerisetra tao Bratunac ry zareo tamin'ny taona 1992 sy 1993.
Mpanao gazety iray antsoina hoe Anja Vujenic , tao amin'ny lahatsoratra nosoratany izay mivoaka isam-bolana ao Belgrade “Pecat’’ tamin'ny faha 8 Jolay 2010, dia nanolotra fanazavana mikasika ny anton'ny tsy nitsidihan'i Filohan'ny Repoblikan'i Serbia an'i Bratunac:
Fantatr'i Tadic fa tsy misy zaza amam-behivavy nalevina tao Potocari, raha oharina amin'ny tao amin'ny fasan'ny Orthodoksa tao Bratunac, Srebrenica sy Skelani. Azontsika an-tsaina izany ny antony tsy nitsidihany an'i Bratunac tamin'ny faha 12 Jolay. Inona izany no azony ambara amin'i Milica Dimitrijevic izay namoy ny zanany lahy, Aleksandar, 5 taona sy i Radisav, 10 taona tao Bratunac tamin'ny faha 16 Janoary 1993, novonoin'ireo olona efa voaresaka teo aloha ireo ihany, andro iray monja mialoha, izay niarahany nijoro sy nialany tsiny [tao Potocari]? Inona no azony lazaina amin'i Cvetko Ristic, zazalahy 13 taona, izay namoy ireo olon-tiany rehetra: ny rainy Novak (42), ny reniny Ivanka (43), ny anabaviny Mitra (18), ary ny rahalahiny Misa? Na koa, inona no azony ambara amin'i Brana Vucetic, zazalahy kely sivy taona, izay nentina tao amin'ny tobin'i Oric, ary namoy ny rainy, ny reniny ary ny rahalahiny? Ahoana no ahazakany mijery ny alahelo eo amin'ny mason'ny renim-pianankaviana ratsy vintana iray, Slavka Matic, izay nandevina ny zanany vavy Snezana sy Gordana, mbola ao anatin'ny hatanorany, na i Ivanka Rankic, izay mamihina amin'ny tratrany ny sarin'ny zanany lahy Nenad izay nodorana, na i Marija Jeremic izay mbola eo am-pitadiavana ny zanany lahy Marko ao anatin'ireo taolam-paty ary mandrehitra labozia ho an'i Radovan, ary manofy ny tenany izay handevina an'i Marko teo akaikiny? Ahoana no fijery an'i Ana Mladenovic izay tsy hahatadidy akory ny rainy Andjelko, satria nandritry ny androm-piainany, dia niaina tao anatin'ny fieritreretana ny rainy notapahan-tenda izy ka hilalaovan'izy ireo baolina kitra ny lohany. Inona re no fanazavana azony atolotra an'i Dragomir Miladinovic, 76 taona, avy any amin'ny tanana kelin'i Kravica Ježeštica, izay miaina anatin'ny ratra marary amin'ny alahelo amin'ny nandaozan'ny zanany lahy Ratko sy Djordje azy?